Sun, Apr 5, 2020 at 6:09am
कोरोनाबाट किन मर्दैछन् महिलाभन्दा बढी पुरुष ? #आहा खबर# बेलौरीका सक्रिय युवा संगठनद्वारा विपन्न र अशक्त घरधुरीलाई राहत वितरण #आहा खबर# सीमावर्ती गाउँमा कोरोनाका ६ संक्रमित भेटिएपछि मर्चवारवासी त्रसित #आहा खबर# अमेरिकामा मात्र काेराेना संक्रमितकाे संख्या ३ लाख नाघ्याे, मृत्यु हुनेमा साढे ८ हजार #आहा खबर# अब एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान नपाइने #आहा खबर# काेराेना संक्रमितसंगै यात्रा गरेका १०० सहयात्री सम्पर्क बिहिन #आहा खबर# सरकारले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाे डाटा लुकाएको विप्लवकाे आराेप #आहा खबर# एकैपटक थप तीन जनामा कोरोना संक्रमण, नेपालमा संक्रमितको संख्या ९ पुग्यो #आहा खबर# मोरङमा प्रहरी र शिकारीबीच दाेहाेराे भिडन्त #आहा खबर# ट्याक्टर दुर्घटनामा परी सहचालककाे मृत्यु, चालक गम्भिर घाइते #आहा खबर# कालिमाटी तरकारी बजारमा खुद्रा व्यापार बन्द, पैदल यात्री र उपभोक्ताको प्रवेशमा पनि रोक #आहा खबर# अपराह्न ४ बजे बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक, के के छन् एजेण्डा ? #आहा खबर# भिडियो खिचेको भन्दै प्रहरीले कुटेपछि... #आहा खबर# स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने टेण्डर प्रक्रिया नेपाली सेनाद्वारा रद्द #आहा खबर# लकडाउन उलंघन रोक्न खोज्दा कांग्रेसका नेतामाथि छुरा प्रहार #आहा खबर#
२३ फागुन, काठमाडौं
पछिल्लो केही समययता मलेसियामा राजनीतिक संकट पनि चुलिएको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजीनामा दिएसँगै त्यहाँको राजनीतिक सरगर्मी बढेको हो ।
उनले राजीनामा दिएसँगै उनको स्थानमा गृहमन्त्री मुहयुद्दिन यासिनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । उनले आफ्नो बहुमत जुटाउने विश्वास मलेसियाका राजाले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै यासिनले संसद्को बैठक २ महिना पर सारेका छन् ।
किन प्रधानमन्त्रीबाट हटे महाथिर ?
सत्तारुढ पार्टीभित्रको तनावको कारण महाथिर मोहम्मद प्रधानमन्त्रीबाट हटेका हुन् । यसअघि सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकलाई हटाउन बनेको उनीहरुको गठबन्धनमा सरकार बनेदेखिनै केही विवाद देखिँदै आएको थियो । तर, महाथिरको राजीनामा पछि भने यो सतहमा आएको हो ।
सरकार बनाउँदा महाथिरले आफूले प्रधानमन्त्रीको अधिकार अनवार इब्राहिमलाई दिने बताएका थिए । तर, उनले त्यसको लागि मिति भने तोकेका थिएनन् ।
यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीको पद नपाएपछि गठबन्धनको पार्टीले महाथिरको साथ छाडेको हो । महाथिरलाई यसअघिका सरकारसँग आफ्नो पनि संलग्नता रहेको बताए पनि पछिल्लो समय आफ्नो कुरा फेरेको भन्दै इब्राहिमको पार्टीले आलोचना गर्दै आएको थियो ।
महाथिर प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए पनि उनको शक्ति भने कम नभएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
महाथिर र अनवार अब्राहिमको बीचमा लामो समयदेखिको विवाद छ । उनीहरुको बीचमा सम्झौता हुँदाको समयमा नै यो गठबन्धनको विषयमा आशंका गरिएको थियो । महाथिर र अनवारले एउटै पार्टीमा रहेर लामो समयदेखि काम गरिसकेका छन् ।
महाथिर प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा २२ वर्षसम्म अनवार सहायक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री थिए । सन् १९९८ मा उनीहरुको बीचमा आर्थिक विषयलाई लिएर विवाद निस्किएको थियो । त्यसपछि उनी महाथिरविरुद्ध आन्दोलनमा निस्किएका थिए । पछि उनी भ्रष्टाचार र अप्राकृतिक यौन मुद्दामा जेल परेका थिए ।
सन् २०१८ को निर्वाचनभन्दा अघि महाथिरले अनवारसँग साँठगाँठ गरेका थिए । त्यसपछि उनी लामो समयदेखि अबद्ध रहँदै आएको पार्टी छाडेर अनवारको पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । पार्टी छाडेपछि पनि उनले निर्वाचनमा आफ्नो गठबन्धनलाई जिताए । यो क्रममा उनले अनवारलाई जेलबाट निकाल्ने वाचा गरेका थिए । सन् २०१८ मे महिनामा उनी राजकीय माफीमा जेलबाट बाहिर निस्किएका थिए । महाथिरले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा असर पार्नसक्ने भएकाले इब्राहिमलाई जेल हालेको आरोप छ ।
मलेसियाको राजनीतिक विवाद अब यत्तिकै साम्य हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीबाट हटेका महाथिरले आफूमाथि धोका भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । महाथिरले तत्काद संसदीय निर्वाचनको आह्वान गरेका छन् । उनले नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत जित्न नसक्ने बताएका छन् ।
मुहयुद्दिनले आफूले मलाए जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् ।